15 Juin 2011, 21:43pm
NY HASIN'NY FOLOALIN-DAHY
Akaiky ny 26 jiona. Foloalin-dahy mihantrana anatrehan'ny tantara sa foloalindahy
norattraina ao amin'ny hasiny sy ny hajany no hiseho eo?
Efa hatramin'ny alahady Rajoelina no jenjina. Talata hariva vao niloa-bava.
Mba azom-panahy ihany nihevitra fa fotoana nisaintsinana izay. Tokony nahatsapany
sy handrefesany izany hoe: nomen'ny rehetra vintana hanavotana tsisy henatra
an'izay mbola azo hiaraha-manohy izy. Satria ny fanjakana iaraha-manana. Ny
tetezamita atao tenierana ary iaraha-mitantana. Madagasikara iaraha-manana.
Kanjo mikimpy sy mihirim-belona ny fanahy aman-tsainy. Tsarovintsika fa izao
antambo mahazo ny tanintsika izao no misy dia noho Rajoelina. Dia hivarina hibaby
henatra miaraka aminy tanteraka ve ny foloalindahy.
Adidiko, adidintsika anatrehan'ny firenena ny mamaky ny resaka amin'ny mpiray
firenena manomboka izao. Ary resaka tsy hitsahatra instony izany fa ho taiza llovaindoria.
Satria ny foloalindahy dia isika no mamelona sy manarama azy, manankina
fitaovam-piadiana aminy hampiasainy.
Ny hasin'ny foloalin-dahy tsy misaraka amin'ny hasin'ny tany sy ny fanjakana iarahamanana.
Raha tsy izay dia fanjakan'iBaroa mihinam-bahoaka.
Ny "lehibe" amin'ny galona nahazo toerana amin'ny foloalin-dahy dia MANDALO. Ny
havantsika, rahalahy, anadahy sy vavy, zanaka, ray, namantsika mifandimby sy
mifanolo hatrany hatrany ao anaty foloalindahy no MITOETRA. Ireo no hitsara
Homenatra ny fanamiany ny havantsika raha sanatria entin-dry "lehibe" manompo
tsangan'olona ka handrahona vahoaka na hamoritra vahoaka. Indrindra fa
tsangan'olona nanendry tena. Satria ny mendrika ny foloalindahy dia izy iarahamanana
Ny vahoaka sy foloalin-dahy MITOETRA. Ny Tantara mitsara.
Ny voninahitry ny miaramila dia izy aro sy reharehan'ny fanjakana iaraha-manana
(repoblika). Raha amin'izao fotoana dia izy aron'ny tetezamita iaraha-manana
nifanarahana, izy aron'ny vahoaka sy ny falalahana.
Adidiko, adidintsika ny manamasaka ny adihevitra fa mila tenierana vaovao ny
tanintsika. Mila hetsika ho fanasin'ny tany sy ny fanjakana iaraha-manana ary ny
foloalindahy ao am-pon'izany.
Antananarivo, faha 15 jiona 2011